Nepali Rajneeti | जेठ ३ र १९ : रहस्यकै गर्भमा नेपाली राजनीतिका नायकहरुको ह’त्या
जेठ ३ र १९ : रहस्यकै गर्भमा नेपाली राजनीतिका नायकहरुको ह’त्या
जेठ ५, २०७८ बुधबार ३०५ पटक हेरिएको
रामचन्द्र तिम्सिना । लोकप्रिय, जनप्रीय र अदभुत क्षमताका धनी जननेता भण्डारीको ह’त्या भएको पनि आज २८ बर्ष भइसकेको छ तर ह’त्या अझै रहस्यमय नै छ । उनको हत्या भएको यही जेठ तीन गते २८ वर्ष पूरा भएको हो । तर पनि ह’त्यारा अझै पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।
उनको विसं २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा भएको थियो । उनी चढेको जिप त्रिशूलीमा खसेको थियो, जहाँ उनी बाँ’चेनन् । तर, उनका ड्राइभर बाँ’च्न सफल भए । त्यो दु’र्घ’टनालाई सबैले ‘दु’र्घ’टना’ होइन, रह’स्यमय वा नि’योजित ‘ह’त्या’ भन्दै आएका छन् । तर कसले र किन गर्‍यो उनको ह’त्या ? यो चाहिँ आजसम्म पनि र’ह’स्यमय नै रहेको छ ।
त्यसैगरी दिवंगत पुर्वराजा विरेन्द्रको बं’शना’श हुनेगरी भएको २०५८ साल जेठ १९ गतेको नारायणहिटि दरबार ह’त्याका’ण्डको पर्दा पनि अझै खुलेको छैन।
दासढुंगा दु’र्घ’टनामा मदनसँगै एमालेका सङ्गठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको पनि नि’धन भएको थियो। उक्त दु’र्घ’टनामा जिपका चालक अमर लामा मात्र बाँ’चेका थिए। उनको पनि २०६० सालमा र’ह’स्यमय ह’त्या भयो। ड्राइभरको समेत ह’त्या भएपछि यो का’ण्ड झन् र’ह’स्यमय बन्दै गएको छ । ती तीनैजनाको ह’त्याको र’ह’स्य अझै सम्मपनि पत्ता लागेको छैन।
त्यस्तैगरी युवराज दीपेन्द्र शाह सहित स-परिवार मा’रि’एको क’हाली लाग्दो दरबार ह’त्याका’ण्ड अझै र’ह’स्यमय बन्दै गएको छ।
मदन भण्डारी नेपाली राजनीतिका एक अदभुत जननेता हुन् । जनताले उनको गुनगान गाउन अझै छाडेका छैनन् । त्यसैगरी पुर्वराजा विरेन्द्रलाई पनि नेपालीहरुले लोकतन्त्रवादी राजाको रूपमा बुझेका थिए।हाल देशको यो स्थिति देख्दा बुढापाखाले नि भन्ने गरेका छन् “मदन भण्डारी” र राजा “बिरेन्द्र” जि’वित भएको भए यो देश अहिले कहाँ पुगिसक्थ्यो ।
चुनावको बेला देशलाई भोलि नै पूरै परिवर्तन गराएर सिंगापुर बनाउला जस्तै गरेर भोट माग्छन् र जितिसकेपछि गाउँमा त मुख पनि देखाउँदैनन् । गाँउघर तिर गएको बेला यस्तो अस’न्तुष्टिहरु धेरै पोखेको सुन्ने गर्छौं।
मदन भण्डारी पार्टीगत रूपमा एमालेका महासचिव भए पनि उनी मुलुक कै आशा लाग्दा नेताका रूपमा उदाएका थिए। प्रखर वक्ता मदन भण्डारीको प्रशंसा नगर्ने सायद कोही थिएनन। काँग्रेसका जननायक विपी कोइराला र एमालेका जननेता मदन भण्डारी नेपालमा अहिलेसम्म सबैले पुज्ने नेताहरूमा पर्छन्।
आजकै दिन २८ वर्ष अगाडि नियाेजित ह’त्या गरिएका मदन भण्डारी र जीवराज आश्रीत ह’त्या’का’ण्डकाे एक सदस्यीय छानबिन समितिकाे संयाेजक केपि शर्मा ओेलि ३ पटक प्रधानमन्त्री र स्वंय मदन भण्डारीकाे पत्नी २ पटक राष्ट्रपति बनेकाे देशमा पनि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रीतले न्या’य पाएनन् भने सामान्य जनताको के होला ? सर्वाधिक गुन्जिने प्रश्न मध्य एको हो। २०५८ साल जेठ १९ र २०५० साल जेठ ३ अझै र’ह’स्यको ग’र्भमा ।